सम्पादकीय Archives - panchakoshitimes.com
कोरोना बिमा बापतको रकम भूक्तानीमा किन ढिलाई ?
कोरोना बिमा गराएकाहरुले बिमा बापतको भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम सहज रुपमा नपाउदा झन्झट बेहोर्न बाध्य छन् । जोखिम वहन गर्न बिमा गरेपछि बिमितले सहज रुपमा पाउनुपर्ने उनीहरुको अधिकार हो। सबै कागजात पुर्र्याएर भुक्तानी दाबीको आवेदन दिदा समेत बिमा कम्पनीहरुले बिमितको रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेका कुराहरु बाहिरिरहेका छन् । बिमा समितिले सुरुमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बिमा पोलिसी ल्याउन कम्...
क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर ( सम्पादकिय )
अहिले विश्वभरी नै कोरोनाको संक्रमितहरु दिन प्रति दिन बढिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा विश्व आक्रन्त बनेको छ । कोरोनाको अत्ति संक्रमणको जोखिमबाट आफूलाई कसरी टाढा राख्न सकिन्छ । त्यसमा सबैले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । अहिले भारत लगायतका अन्य देशहरुबाट नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल फिर्ता ल्याइरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । विदेशबाट ल्याइएका नागरिकहरुलाई क्वारेन्टाइनमा र...
८० प्रतिशत पनि मत नखस्नु राम्रो विषय हो सरकार ?
यतिखेर देश उपनिर्वाचनको माहोलले तत्तिएको छ । सनिवार देशभरका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह उपनिर्वाचन अन्तर्गत रिक्त स्थानमा निर्वाचन भएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य ३ र स्थानीय तहका ४८ (प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष) सिटका लागि मतदान भएको हो । यतिखेर देशभरबाट निर्वाचन परिणामहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । यतिखेर दलहरु आफ्नो बिरासत बचाउने र अर्काको विरासत...
हतियारसहित पक्राउ परेका तरुण दल सभापति जेल चलान
हतियारसहित पक्राउ परेका तरुण दल नेपालगञ्जका नगर सभापति सन्दीपजङ्ग शाह पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत बाँकले सोमबार शाहलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार शाहसँगै पक्राउ परेका अन्य तीन जनालाई भने एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। सरकारी वकिल...
काग तिहारको दिन कुन राशिले के किन्ने , पूजा कसरी गर्ने ? राशि अनुसार यसरी उठाउनुस् लाभ !
पञ्चाङ्ग अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका अथवा काग तिहारका दिन धनवन्तरी त्रयोदशी अर्थात धनतेरस मनाउने गरिन्छ । धन त्रयोदशी र धनतेरस पनि यसै दिनलाई भन्ने गरिन्छ । यो दिन मूलतः आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरि र धनका देवता कुबेरको जन्मोत्सव मनाउने पर्व हो । धनतेरसका दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ भाँडाकुडा र सुनचाँदीका गरगहना किनमेल गर्ने परम्परा रही आएको छ । धनतेरस पछिल्लो...
घोपा क्याम्प जाने बाटोमा खाल्डै खाल्डोः कसले बनाउछ सरकार ?
धरानको वीपी कोईराला विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पताल जाने बाटो खाल्डै खाल्डो भएकोले विरामी लान सास्थी भएको छ । दिनहुँ एम्बुलेन्स ओहोरदोहोर गर्ने मूख्य बाटो नै बिग्रिएको लामो समय भयो तर सडक मर्मत गर्न कसैले चासो नदेखाउँदा विरामी बचाउँन अस्पताल जानेहरु अस्पताल पुग्ने बेला सम्म विरामी हुने गरेका छन । बाटो बिग्रेको महिनौ बितिसक्यो । कालोपत्रे सडक भत्किीएर खाल्डै खाल्डोले भएको छ तर पनि धरानका ज...